Hey’da dulmeerta la socodka jinsi faquuqa Spain ayaa eedeyn disha kaga tuurtay kooxda Barcelona oo ay jamaahiirteeda ku aflagaadeyeen Cristiano shakina ka abuureen jinsiyadiisa intii lagu guda jiray kulankii EL Classico ee dhexmaray labada koox.
Intii lagu guda jiray waqtigii xusitaanka Johan Cruyff, oo dhawaan u geeriyooday cudurka kansarka, waxaa qeyb kamid ah codadka jamaahiirta Barca laga maqlayay aflagaado ay u geysnayaan Cristiano Ronaldo, sida ay qoreen jariiradaha Spain kasoo baxa badankooda.
“Waxyaabahani waa nasiib daro, ceeb iyo wax ciqaab lagu muteysan karo marka la eego qaanuuka Sport ee 2007, ciyaartooyda iyo garsooreyaasha waxay badanaa la kulmaan aflagaado iyo jinsi faquuq, ciqaab tusaale u noqota kuwa qaldan ayaa loo baahan yahay” ayuu yiri agasimaha guud ee hey’da ay ku mideysan yihiin raga iyo dumarka uu damiirkooda jinsi qaldamay ama uusan aheyn sidii loogu talagalay.
Ramirez ayaa intaa ku daray “[Cristiano] Ronaldo wuxuu dhexda kaga jiraa su’aalo ay saxafiyiinta iyo dadka isaga neceb iyo taageeroyaasha kooxaha kale ay ka keenayaan jinsiyadiisa raganimo si ay u ceebeyaan isaga, laakin argagax galinta jinsiga ma ahan in qofka lagu tilmaamaba in uu yahay qofaan rag aheyn, laakin taasi waxay kaliya xanuun dareensiineysa dadka dhibkaas qaba, arintaan ma aha wax aflagaado laga dhigo ama wax lagu ceebeysto” ayuu yiri ninkaan ka madaxda ah ururkaas.
Cristiano ayaa mudooyin kii u danbeeyay dhexda kaga jiray dood ku sahabsan jinsigiisa aadaminimo iyadoo ay saxafiyiinta qaar ee isaga dhaleeceeya ay ku tilmaamaan sababta uu aado Marooko iney tahay arin jinsi uu la leeyahay feer yahanka wadankaas u dhashay ee Ahmed Al Badri.
More in this category: Zidane Oo Hadal Kooban Kaga Jawaabay Guuldaradii Kooxdiisa Ka Soo Gaadahay Cayaarta Champion-ka »